ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ ဒေသတွင်း ဖွံဖြိုးရေ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ထည့်ဝင်ထားသော ငွေကြေး သိန်းပေါင်းများစွာ ကို မိမိတို့ ကိုယ်ကျိူး စီးပွါးအတွက် အလွဲ သုံးစား ပြုလုပ်
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ ဒေသတွင်း ဖွံဖြိုးရေ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ထည့်ဝင်ထားသော ငွေကြေး သိန်းပေါင်းများစွာ ကို မိမိတို့ ကိုယ်ကျိူး စီးပွါးအတွက် အလွဲ သုံးစား ပြုလုပ်
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ ဒေသတွင်း ဖွံဖြိုးရေ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ထည့်ဝင်ထားသော ငွေကြေး သိန်းပေါင်းများစွာ ကို မိမိတို့ ကိုယ်ကျိူး စီးပွါးအတွက် အလွဲ သုံးစား ပြုလုပ်ထားသော ကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများကို ဥပဒေအရ စစ်ဆေး အရေးယူပေးပါရန် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ၊ အထွေထွေ အုပ်ချူပ်ရေး ဦးစီး ဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန အသီးသီးတို့ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ အတွင်း ကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ထားသော ငွေကြေးစာရင်းများမှာ
၁. ၂၀၀၅ ခုနှစ် ညောင်ခါးရှည် တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဆေးပဒေသာပင် ကျေးရွာပေါင်း တစ်ဆယ့်လေးရွာ စုပေါင်းထည့်ဝင်ငွေ (ကျပ်သိန်း နှစ်ဆယ်ကျော်)
၂. ၂၀၀၉ ခုနှစ် တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဓါတ်မှန်ခန်း တည်ဆောက်ရန်နှင့် အထွေထွေဆေးရုံ ပြုပြင်ရန် ကောက်ခံထားသောငွေနှင့် သီးခြားအလှူရှင်များ၏ ထည့်ဝင်ငွေ (ငွေကျပ် သိန်းပေါင်းငါးဆယ်ကျော်)
၃. ၂၀၁၂ ခုနှစ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ ပရဟိတ လူမှု့ကူညီရေးအဖွဲ့ နာမည်ခံဖွဲ့ထားသော (မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ) အသင်းမှ လူနာတင်ယာဉ် ၀ယ်ယူရန် ပြေစာဖြတ်ပိုင်းများဖြင့်ကောက်ခံထားသော ငွေနှင့် သီးခြား အလှူရှင်များမှ ထည့်ဝင်ငွေ (ငွေကျပ် သိန်းပေါင်းလေးဆယ်ကျော်)
၄. ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် အပေါင်းပါများသည် ကျွဲ၊ နွား တရားမ၀င် သယ်ယူရောင်းဝယ်သူများထံမှ ငွေကြေးရယူ၍ နယ်ကြော်သယ်ဆောင်ခွင့် ပြုခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်း ငွေပေးငွေယူ ချေးငှားခြင်းကိစ္စ ပိုင်ဆိုမှု့ ကိစ္စများတွင် ငွေကြေးပေးနိုင်သူများဘက်မှ မတရားသက်သေခံခြင်း တဖက်အမှု့သည်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးခြ၍ မလျှော်သြဇာ သုံခြင်း ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။
ကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ရန်အတွက် ကောက်ခံထားသော ငွေကြေးများကို လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မတီမှ တင်ပြသော စာရင်း ပြေစာ လယ်ချာ များသည် တိကျသောစာရင်းများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှင်လင်းခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ လည်ကောင်းတို့ တင်ပြသော ငွေကြေးအစီရင်ခံစာများတွင် ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လက်ပေး လက်ယူ မှု့ ကိုယ်ကျိူးစီးပွါးအတွက် အသုံးပြုမှု့မှာ ပါဝင်နေပါသည်။ တရာဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ကော်မတီများနှင့် စစ်ဆေးထားသော ငွေစာရင်းများအဖြင့် ပေါ်လွင်မှု့ မရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာလူထုမှ လက်မခံ အတည်ပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ယခုအချိန်တွင် လစဉ်ကျေးရွာအတွင်းသုံး လျှပ်စစ်မီတာ ပျောက်ဆုံးယူနစ်များအတွက် ပေးဆာင်ရမည့်ငွေကြေး (တစ်ဆယ့်နှစ်သိန်းကျပ်) နီးပါးခန့်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ လစဉ်မှန်ကန်စွာပေးသွင်းခြင်း မရှိခဲ့သည်အတွက် ကျေးရွာတွင်း ငွေကြေးရှုတ်ထွေးမှု့၊ လျှပ်စစ် မီးဖြတ်တောက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
အထက်ပါ ငွေကြေးများကို စုဆောင်းကောက်ယူထားပြီး စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းများ မရှိသေးပါ ထပ်မှန်၍ ငွေကြေးများ ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်။ ကောက်ခံထားသောငွေကြေးများကို ကျေးရွာလူထု သဘောထား မတောင်းခံပဲ ကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် အပေါင်းပါများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုတည်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ခွဲဝေ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ ပြည်သူနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင် တာဝန်ယူမှု့ တာဝန်ခံမှု့ ပွင်းလင်မြင်သာမှု့ ဥပဒေနှင့် အညီလုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒပြောင်း စနစ်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်သဖြင့် ၀န်ထမ်းများ၏ အမူအကျင့်များကို ပြောင်းလည်းရန် ထပ်ခါတလည်းလည်း ပြောကြား ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခေတ်စနစ်နှင့် အညီ မည်သည့်အရာမှ လိုက်ပါပြောင်းလည်း မှု့ မရှိပါ။ မြို့နယ် အဆင့်ဆင့်ကို အလွဲသုံစားမှု့များအတွက် တိုင်ကြားမှု့များ ရှိခဲ့သော်လည်း အကျင့်ပျက်.၀န်ထမ်း များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး တံစိုးလက်ဆောင် လပ်ပေးလပ်ယူ ပြုလပ်ပြီး တိုင်ကြားမှု့ အမှု့တွဲများကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း ဖုံးကွယ်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စုပေါင်းထည့်ဝင်ငွေများကို အလွဲသုံးစား ကိုယ်ကျိူးစီးပွါးအတွက် အသုံးပြုထားသော ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် ငွေကြေးတာဝန်၇ှိသူများကို ဥပဒေနှင့် အညီကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီးသို့ တင်ပြတိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ညောင်ခါးရှည် စံပြကျေးရွာ